Filtrer les éléments par date : samedi, 08 juin 2019
Vatolava Isorana: Basy efatra sy bala maromaro, nisy nanatitra teny amin’ny Zandary
Ray aman-drenina dahalo no nanatitra an-tsitrapo an’ireo basy mahery vaika ireto teo anivon’ny Zandary ao Vatolava Isorana – Faritra Matsiatra Ambony. Efa eo anivon’ny komandin’ny fari-piadidian’ny Zandary Fianarantsoa hatramin’ny 5 jona 2019 teo ireo basy ireo.
Nanokatra fanadihadiana ny Zandary hamantarana ny tompon'andraikitra tamin’ny fanodikondinana na fangalarana ireto basy mahery vaika, fitondra an’ady ireto.
Nandray fepetra ny fanjakana, hetsika tafiditra amin’ny famerenana ny fandriampahalemana eto Madagasikara, fa izay mamerina basy tsy ara-dalàna teny ampelan-tanany alohan’ny 20 jona izao eny amin’ny mpitandro ny filaminana, dia tsy iharan’ny sazy.
samedi, 08 juin 2019 19:23
Madagasikara - Aostralia: Manamafy ny fiarahany miasa
Nitsidika tamim-pomba fifanajana ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, tao amin’ny lapan’i Mahazoarivo, ny zoma 07 jona 2019, ny Ambasadaoro aostralianina miandraikitra an’i Madagasikara, Ramatoa Jenny Dee. Ny fanohizana ny fiaraha-miasa efa misy eo amin’i Madagasikara sy Aostralia no nifantohan’ny diniky ny roa tonta.
Mandray anjara betsaka amin’ny fampiroboroboana ny lafiny sosialy eto Madagasikara i Aostralia, amin’ny alalan’ireo tetikasa madinika, indrindra ny eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, toy ny fanavaozana ny sampana “Traumatologie” ao amin’ny Hôpitaly Miaramila Soavinandriana, izay novatsian’ny fandaharan’asa fanavaozana fotodrafitr’asan’ny masoivoho aostraliana, ary tohanan’ny ONG « Australian Doctors for Africa ».
Maro ireo resaka mandeha fa hilatsaka Ben'ny Tanàna Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izaho aloha tsy manana vaovao manokana momba izay, ary tsy mbola nisy fotoana niresahana izay taminy mivantana.
Raha izay no mety fanapahan-keviny, na ny tolo-kevitra avy amin'ireo mpomba azy na ny manodidina azy, dia fahadisoana izay raha ny eritreritro.
Raha zohiana ny zava-misy ankehitriny, na ny fomba firesaky ny filoha ankehitriny, na ireo manodidiana azy, na ireo mpomba azy rehetra, dia ady amin'andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany no ampandehanana ny resaka politika eto. Izay fahadisoana ihany koa izay amiko.
Rehefa tsy mpomba an'i Filoha Andry Rajoelina eto, dia avy hatrany dia lazaina fa mpanohana Marc Ravalomanana, toa ny tsy misy mahazo mijoro amin'ny tsanga-kevitra hafa intsony.
samedi, 08 juin 2019 13:56
Hugues Ratsiferana: Nivoaka ny fonjan’Antanimora omaly
Voampanga ho nanodinkodina fananam-panjakana ity mpanolontsaina manokan'ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina sady Tale jeneralin’ny AMDP (Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion d'Entreprises) ity. Famoahana entana tao Ambohitsorohitra tamin’ny faramparan’ny volana janoary 2019 no nanenjehana azy.
Nosamborina i Hugues Ratsiferana sy mpiara-miasa akaiky aminy iray ny 1 febroary 2019, ary natao famotorana avy hatrany tao amin’ny Toby Ratsimandrava. 3 febroary 2019, nilatsaka ny didy savaranonando mitazona am-ponja azy. Nalefa teny Antanimora izy, miandry fitsarana.
Nivoaka ny didim-pitsarana ny 19 febroary 2019, manasazy an’i Hugues Ratsiferana herintaona an-tranomaizina, sazy mihatra miampy onitra 5 tapitrisa Ariary.
Nampakatra ny raharaha tamin’ny Fitsarana ambony izy.
Betioky Atsimo: Aorian’ny Pantekôty vao hisy herinaratra
Hankalaza ny Pantekôty anaty haizina ny eto Betioky Atsimo, noho ny tsy fisian’ny herinaratra hatramin’ny talata lasa teo. Voalaza fa tsy dia avy amin’ny tsy fisian’ny solika loatra no fototry ny olana fa teknika amin'ny gropy no mahatonga ny fahatapan-jiro eto an-toerana.
Mbola nafarana any Antananarivo ny piesy ahafahana manamboatra ilay gropy. Tombanana ho vita ny Alatsinainy 10 jona ho avy izao ny asa fanamboarana ahafahana mamerina ny herinaratra amin’ny laoniny.
samedi, 08 juin 2019 13:45
Betioky Sud: Efatra andro tsy misy jiro
Nanomboka tamin'ny talata 4 jona 2019 no miaina anaty haizina ny eto Betioky Sud, Faritra Atsimo Andrefana vokatry ny tsy fisian'ny herinaratra noho fahasimban'ny milina famokarana herinaratra.
Nanamarika ny serasera eo anivon'ny Jirama fa mbola nafarana any Antananarivo ny piesy ahafahana manamboatra io milina io. Tombanana ho vita ny Alatsinainy ho avy izao ny asa fanamboarana ahafahana mamerina ny herinaratra amin'ny laoniny.
Mitaraina ny mpandraharaha sy ny mpivarotra mampiasa herinaratra. Sahirana ny mpanao volo, cyber, mpanao soudure, mpanety...noho io tsy fisian'ny herinaratra io.
samedi, 08 juin 2019 13:17
Haute Cour Constitutionnelle: Jean Eric Rakotoarisoa est inapprochable
Dans un communiqué publié sur son site internet, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a fait savoir que jusqu’à la proclamation des résultats officiels des élections législatives, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle ne reçoit ni candidat, ni mandataire de candidat, ni émissaire de candidat, ni soutien de candidat.
Pour toute contestation, les concernés sont invités à suivre la procédure normale du contentieux électoral, qui a fait l’objet d’une sensibilisation et d’une large diffusion avant le scrutin.
« Tout contact préalable avec un membre de la Cour ou tout responsable et agent de l’institution est prohibé car relevant du trafic d’influence ».
samedi, 08 juin 2019 13:14
8 juin: Océans
8 juin: Journée Mondiale des océans.
samedi, 08 juin 2019 13:11
8 juin: Tricot
8 juin: Journée mondiale du tricot.
Notanterahina tao amin'ny Hôtel Colbert ny fanaovan-tsonia fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar, GFEM sy ny gazety Jejoo omaly 07 jona 2019.